REP: ilhaan Cumar oo si rasmi ah u diiwaan gelisay furiinka ninkeeda xilli lagu tuhmayo xiriirka nin cadaan ah - Awdinle Online
REP: ilhaan Cumar oo si rasmi ah u diiwaan gelisay furiinka ninkeeda xilli lagu tuhmayo xiriirka nin cadaan ah
Ilhaan Cumar oo ka tirsan Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa si rasmi ah maxkamad uga diiwaan gelisay codsi ah in laga furo ninkeeda, ahna aabaha saddexdeeda caruur, xiili ay jirto xan ku saabsan in xiriir hoose ay la leedahay nin degan magaalada Washington DC oo lagu magacaabo Tim Mynett.
Warqadaha codsiga furritaanka Ilhaan ee ninkeeda Axmed Xirsi oo 4-tiii October laga diiwaan geliyey maxkamadda Hennepin County ee gobolka Minnesota ayey ku sheegtay in guurkooda uu yahay mid aan dib loo hagaajin karin.
Ilhaan oo 38 jir ah iyo Axmed ayaa is-guursaday 2002. Waxay mar kala tageen 2008, hase yeeshee waxay dib isu guursadeen sanaddii 2018.
“Waxaa xiriirka guurkeena gaaray dhaawac aan dib loo bogsiin karin” ayaa ku qornaa warqadaha ay Ilhaan gaysay maxkamadda.
Ilhaan ayaa warqadaha ku sheegtay in iyada iyo Axmed midkoodna uusan dooneyn in midka kale laga ilaaliyo inuu dhowaado. Waxay sheegtay inay doonayaan in si isla eg loogu ogolaaday haysashada iyo karinta caruurtooda.
Arrintan ayaa imaneysa ayada oo dhowr bil ka hor ay soo baxday in Ilhaan ay xiriir jaceyl oo hoose la leedahay Tim Mynett. Xaaska Tim, oo lagu magacaabo Beth Mynett ayaa sidoo kale bishii August maxkamadda ka codsatay in ninkeeda laga furo, kadib markii ay ogaatay xiriirka uu la leeyahay Ilhaan.
Tim Mynett ayaa maxkamadda Washington DC ka diiwaan geliyey kiis uu ku beeninayo inuu xiriir jaceyl la leeyahay Ilhaan.
Tim ayaa ka shaqeeya urur qaabilsan doorashooyinka, taasi oo lacag ka badan 250,000 oo dollar ka heshay ololaha Ilhaan. Lacagtaas ayaa abuurtsay su’aalo ku saabsan in shaqada uu Tim u qabtay Ilhaan aysan u qalmin, balse lacagta lagu siiyey xiriirka labadooda ka dhaxeeya.
Sida ku cad warqadaha ay maxkamadda u gudbisay Beth Mynett, ayada iyo Tim ayaa kala guuray bishii April kadib markii Tim uu qirtay inuu xiriir jaceyl la leeyahay Ilhaan.
Ilhaan Cumar ayaa diiday in illaa iyo hadda ay wax jawaab ah ka siiso warbaahinta xiriirka la tuhmayo inuu kala dhaxeeyo Tim oo ah nin caddaan ah iyo furiinka ay diiwaan gelisay jimcihii ay ninkeeda Axmed Xirsi.
Previous article Khayre Oo Daah-Furay Isku Xirka Nidaamka Maaliyadda Dalka
Next articleDhagayso: Xildhiban Ka Tirsan Barlamanka Somaliya Oo Ka Hadlay Amniga Muqdisho